थारु भाषाको पहिलो तीज गीत (भिडियोसहित)
निशान न्युज श्रावण २९, 2075
काठमाडौं । थारु भाषाको पहिलो तीज गीत भखरै सार्वजनिक गरीएको छ । विगत लामो समयदेखि कलारिता क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायी तथा समाजसेवी दिपक चौधरीेको निर्देशनमा गोविन्द श्रेष्ठको सहयोगले निर्माण भएको पहिलो ऐतिहासिक थारु तीज गीत सार्वजनिक गरीएको छ । चम्पन सांस्कृतिक समूहको महासचिव दिपक चौधरीले नेपाली थार...
मोनिका बनिन् मिस नेपाल नर्थ अमेरिका
श्रावण २७, 2075 न्यूयोर्क । न्युयोर्कमा सम्पन्न प्रथम नेपाल नर्थ अमेरिका २०१८ को बिजेतामा मोनिका घले घोषित भएकी छन् । प्रथम मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०१८ कि प्रथम बिजेता सुजाता लामा बनिन् भने द्धितिय विजेता श्रीजना राई घोषित भए । मिस ट्या...
‘दालभात तरकारी’मा पुष्पल र स्वस्तीमाक...
श्रावण २५, 2075 काठमाडौं । हाँस्यकलाकार किरण केसीले आफ्नो ६० औँ जन्मदिनको अवसरमा ‘दालभात तरकारी’को घोषणा गरेका थिए । यो सिनेमालाई उनका कान्छा छोरा सुदन केसीले निर्देशन गर्दैछन् भने सिनेमाको कथा हरिवंश आचार्यले लेखेका हुन् । यतिबेला सिने...
माया गर्छु भन्ने धेरै आए, गए वालै भएन...
श्रावण २२, 2075 ईटहरी । चन्दा खडका पुर्वमा दैनिक गुञ्जिने एउटा नाम हो । एक रेडियोमा कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा रहेकी खडकाको परिचय पछिल्लो समय बदलिएको छ । रेडियोका अलावा स्टेज कार्यक्रममा समेत उनको माग उत्तिकै छ । बिगत केही बर्षदेखि उनी ...
श्रावण २२, 2075 काठमाडौं । सञ्चारकर्मी गीता अधिकारीको शब्द रहेको तीजसम्बन्धी ‘यतै घमाइलो उतै घमाइलो’ गीत भिडियो बजारमा आएको छ । चलचित्र पत्रकार संघका उपाध्यक्षसमेत रहेकी अधिकारीको शब्द तथा गायिका सारीका घिमिरेको आवाज रहेको उक्त गीति भिडि...
रामभक्तको मनको ढोकामा किन पुगिन् वर्ष...
श्रावण २१, 2075 काठमाडौं । सुगम संगीतका स्थापित गायक रामभक्त जोजिजू आफ्नो नयाँ गीतको म्युजिक भिडियोमार्फत दर्शक तथा स्रोतामाझ आएका छन् । सोमबार साँझ इमेज च्यानलबाट प्रिमियर गरिएको ‘मनको ढोका’ शीर्षकको उक्त गीतको म्युजिक भिडियोलाई जोजिजूल...
कस्तो छ गीताको एतै घमाइलो उतै घमाइलो ...
श्रावण २१, 2075 काठमाडौं । नेपाली महिलाहरुको महान पर्वm तीजको अवसर पारेर सञ्चारकर्मी गीता अधिकारीको ‘एतै घमाइलो उतै घमाइलो’ तीज गीत बजारमा ल्याएकी छन् । नेपालको पहिलो नायिका भुवन चन्द, नेपालको पहिलो रंगीन चलचित्रकी नायिका चैत्यदेवी, हास्...
सरिताले किन भनिन्, ‘यसपाली सबै परदेशम...
श्रावण २०, 2075 काठमाडौं । झण्डै ८ वर्षदेखि सांगीतिक दुनियामा रमाउँदै आएकी सरित प्रजापति यो सालको तीजमा ‘यसपाली सबै परदेशमा’ बोलको गीतमार्फत प्रस्तुत भएकी छन् । उनले प्रत्येक वर्ष तीजका नयाँ नयाँ कोशेली पस्किँदै आएकी छन् । अघिल्लो वर्ष उ...
कविता बनिन् अन्तर्राष्ट्रिय डान्सिङ स...
श्रावण १९, 2075 काठमाडौं । सर्लाहीकी १८ वर्षीया कविता नेपाली नेपालकै पहिलो डान्सिङ सुपरस्टार भइन् । एपीवान टेलिभिजनद्धारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय डान्सिङ रियालिटी सो ‘बुगीवुगी’को फाइनल राउन्डमा आफ्ना अन्तिम दुई प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उनल...
इन्दिरा र अम्रिता माइती घर जाने तयारी...
श्रावण १९, 2075 काठमाडौं । हिन्दु नारीहरुको महान चाड तीज नजिकिँदै गर्दा कलाकारहरुलाई गीत बजारमा ल्याउन भ्याइनभ्याई छ । त्यही क्रममा ‘दिदी बहिनी माइती घरमा’ बोलको गीत बजारमा आएको छ । इन्दिरा रजक र अम्रिता कुँवरको मिठो स्वर रहेको सो गीतको ...
मायाप्रेममा आधारित ‘प्रेमनाथ’का कलाका...
श्रावण १७, 2075 काठमाडौं । अभिनेता गणेश बेल्वासेले निर्माण गर्न लागेको फिल्म ‘प्रेमनाथ’ का कलाकारहरू छनौट भएका छन् । छनौट भएका कलाकारहरूसँग काठमाडौंमा लिखित सहमति भएको छ । ‘प्रेमनाथ’मा नीर शाह, मोहनप्रसाद निरौला, सुरवीर पण्डित, कमल गाउँल...
४० वर्षपछि के आयो ‘काजीको घोडा’ मा ? ...
श्रावण १५, 2075 काठमाडौं । अहिले फेसबुक, ट्वीटर वा इन्स्ट्राग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालको जमाना छ । त्यही भएर आजकलका युवा युवतीदेखि पाका उमेरका व्यक्तिले पनि नयाँ युगको सदुपयोग गरिरहेका छन् । तर, डा. रामकृष्ण निरौलाले ४० वर्षअघिको कथालाई ...
‘गोपी’मा खगेन्द्रले सुरक्षासँगै वर्षा...
श्रावण १४, 2075 काठमाडौं । ‘गोपी’ का अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेले अब दुईवटी नायिकासँग रोमान्स गर्न पाउने भएका छन् । छायाङ्कनको तरखरमा रहेको फिल्म ‘गोपी’मा नायिकाका रुपमा वर्षा सिवाकोटी पनि जोडिएकी छिन् । अभिनेत्री सुरक्षा पन्त यसअघि नै फिल...
बाल गायक आयूष चम्किदैं
श्रावण १४, 2075 काठमाडौं । सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेका बाल गायक अशोक दर्जीको जस्तै स्वर दिएर इलामका आयुस घिमिरेले पनि चर्चा बटुल्न थालेका छन् । इलाम माइजोगमाई ४ नाम्सालिङका १२ वर्षिय गायक आयुसको पहिलो गीत ‘फुल बनेर’ सर्वाजनिक भएको छ । ...
बर्षालाई पाउन अनुप र प्रशान्तको टकराव !
श्रावण १४, 2075 सिंगल थिएटरलाई टार्गेट गर्दै चलचित्र ‘जय शम्भु’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । मल्टिप्लेक्समा पुग्ने दर्शक यो ट्रेलरबाट आकषिर्त हुन मुश्किल छ । अनुप विक्रम शाही र प्रशान्त ताम्राकारको टकरावमा यो चलचित्र बनेको ट्रेलरबाट पनि...
← अघिल्लो 12… 34 35 36 37 38 39 40 41 42 … 61 62 पछिल्लो →